Ny iPad iPad 2020 izao dia misy ao amin'ny faritra nohavaozina ao amin'ny Apple | Vaovao IPhone
Ny lisitry ny Apple vokatra nohavaozina sy nohavaozina mitombo hatrany. Amin'ity tranga ity, nanampy ny orinasa Cupertino ora vitsy lasa izay ny maodely iPad Pro 11 sy 12,9-inch vaovao natomboka tamin'ny martsa 2020 lasa teo.
Ity dia vaovao tsy azo lavina fa vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa te-hitahiry vola euro vitsivitsy raha ampitahaina amin'ny vidin'ny ofisialy ny vokatra fa izy ireo kosa te hanana ny antoka rehetra avy amin'ny Apple. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy tadidintsika fa tsy ny vidiny tsara indrindra izy ireo raha ampitahaina amin'ny fivarotana hafa izay mivarotra vokatra vaovao na vita amin'ny laoniny aza, saingy manana fiadanan-tsaina isika fa ny famerenana ireo avy any Apple dia notanterahina ny milimetatra ary tsy hanana olana isan-karazany amin'izy ireo isika.
Ireo maodely iPad vaovao ireo dia mandalo ny sivana ofisialy Apple hametrahana azy indray, Ny fiantohana roa taona dia tsy nampiana ary tsy amidy amin'ny boaty vokatra tany am-boalohany izy ireo (Izy io dia fotsy izay manondro mazava fa vokatra voaverina io) fa ny zavatra hitantsika ao anatin'ny tariby roa, charger ary ny hafa dia mitovy tanteraka. Izany no mahatonga anay hino fa safidy tsara ny mitahiry vola euro vitsivitsy ary manadino ireo olana mety hitranga amin'ny fividianana magazay hafa.
Ny tahiry amin'ireo iPad Pro ireo dia hiankina amin'ny varotra azo, amin'izao fotoana izao tao amin'ny tranonkalan'ny firenentsika dia nahita maodely maromaro misy izahay ary azon'izy ireo antoka fa tsy miova rehefa mandeha ny andro. Ireo izay te hahita ny iPad misy dia afaka miditra ao aminy Fizarana Apple reconditioned azy manokana.
Ny orinasa dia mijery ny antsipirian'ny iPad Pro mba hisorohana olana fa manana 15 andro izahay hamerenanana ilay vokatra sy ny taonany feno fiantohana raha sendra misy olana. Ny tahiry be indrindra hitanay nandritra ny fandefasana ity lahatsoratra ity dia ho an'ny iPad Pro Pro Wi-Fi + 12,9-inch + 1 Cellular - Silver Gen 4 izay lafo 1.419 euros. Ny vidiny mahazatra dia 1.749 Euros ho an'ny tahirintsika 330 euros.
Ary ianao, Efa nividy fitaovana nohavaozina Apple ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ny iPad iPad 2020 dia misy ankehitriny ao amin'ny faritra nohavaozin'i Apple
Apple dia namoaka ny beta 5 an'ny iOS sy iPadOS 15 ho an'ny mpamorona